Ngwongwo, ime | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akụrụngwa: Ime ụlọ
Biko gwa m ... Achọrọ m ịzụta sofa. Kedu usoro nke a pụrụ ịdabere na ya: dolphin ma ọ bụ akwụkwọ euro?
Biko nye ndụmọdụ .... Achọrọ m ịzụta sofa akuku. Kedu usoro a pụrụ ịdabere na karịa: dolphin ma ọ bụ akwụkwọ euro? M na-adụ onye dolphin ndụmọdụ, ahụrụ m m n'anya nke ukwuu. Isi ihe bụ na enwere ezigbo onye nrụpụta, na arịa ụlọ bụ ọkụ, nke eji ezigbo ihe. Ọ bụrụ na ị na-ehi ụra ...
Kedu kichin ịhọrọ: kenyacha ma ọ bụ matte ????
Kedu kichin ịhọrọ: kenyacha ma ọ bụ matte ???? Enweghị m mmasị mkpịsị aka na-egbuke egbuke. Ma nke a bụ uche m. Matt, na ihe niile a na-ahụ anya. Site na ụmụ ezì na-eme ụfọdụ. Na-eme ...
Kedu ihe bụ nsogbu ahụ, oleekwa ihe dị egwu bụ ihe eji emepụta ihe nke ụlọ na ihe eji eme ihe?
Kedu ihe bụ nsogbu ahụ, oleekwa ihe dị egwu bụ ihe eji emepụta ihe nke ụlọ na ihe eji eme ihe? Anyị na-esi n'otu ụzọ gbaba n'ụdị chipboard na-adịghị mma, ịzụta ihe ụmụaka. Ọ na-esi ísì ụtọ ka ụmụaka ghara ihi ụra. Anyị kwagara otu izu ...
Mkpọchi na ngwa nju oyi! Achọrọ m mkpọchi na ngwa nju oyi, site na ndị agbata obi. Ọ dị onye hụla ndị a?
Mkpọchi na ngwa nju oyi! Achọrọ m mkpọchi na ngwa nju oyi, site na ndị agbata obi. Ọ dị onye hụla ndị a? M hụrụ otu friji nke oge a na mkpọchi na ụlọ ahịa ahụ, ọ ka juru m anya. Ya mere, lee, chọta. na ...
Kedu ihe bụ mita?
Kedu ihe bụ mita? Ogwe 1 m n'ogo ogologo na 1m 1ONO1m dị ogologo bụ naanị mita 1 n'ogologo ogologo oge na mita mita 1 n'ogo obosara 1 N'àkwà ...
Kedu ka ị ga - esi ghọta ọdịdị nke ụfụfụ na - agba chaba site na agba? Gịnịkwa bụ njupụta kasị mma maka sofa? kedukwa ihe kachasị mma maka sofa?
Kedu ka ị ga - esi ghọta ọdịdị nke ụfụfụ na - agba chaba site na agba? Gịnịkwa bụ njupụta kasị mma maka sofa? kedukwa ihe kachasị mma maka sofa? otutu njiri agba di iche iche. Ụkpụrụ ahụ bụ otu ihe ahụ dị ka ịmata ọdịiche nke ịdị arọ nke apụl.
Nyocha banyere refrjiraeto electrolux? Ọ bara uru azụ?
Nyocha gbasara Igwe nju oyi Electrolux? ọ bara uru ịzụta Enwere m ọgbakọ Kaliningrad ... friji onwe ya na-arụ ọrụ nke ọma, mana plastik dabara na hel. Igwe nju oyi kachasị mma anyị nwere VestFrost Electrolux dịkwa onwe onye. ...
Ohiri isi ga-aka mma - site na ntutu kamel ka ọ bụ na holofiber? Kedu nke kachasị adaba ma dị mma?
Ohiri isi ga-aka mma - site na ntutu kamel ka ọ bụ na holofiber? Kedu nke kachasị adaba ma dị mma? Ọkpụkpọ nke holofiber na-agbanwe agbanwe na-asacha 1. Enweghị m ike ikwu ihe ọ bụla gbasara ajị anụ. kamel ...
Ogologo oge ole ka ụfụfụ na-ebugo elu? Nri, ụlọ kpụ ọkụ n'ọnụ.
Ogologo oge ole ka ụfụfụ na-ebugo elu? Nri, ụlọ kpụ ọkụ n'ọnụ. dabere na oke, ma ọ bụrụ na ị na-agbọ ụfụ ụzọ, ụlọ egwu, slopes, wdg, ọ ka mma nke mbụ na isi ihe, emesịkwa, ...
Achọrọ m ịmepụta igwe na-asacha na kichin
Achọrọ m ịmepụta igwe na-ehicha ọkụ na kichin 60 cm anaghị emerụ. Ngwa igwe na-adịghị ada ada mgbe ọ na-agbagharị. N'otu oge ha nwere ike ịkwaga. Na ihe siri ike kụọ mgbidi. ...
Kedu ụdị ngwá ụlọ dị iche iche?
Kedu ụdị ngwá ụlọ dị iche iche? ma ọ bụrụ na emehieghị m, nke a bụ otu ụlọ nkwonkwo ụlọ oche, nke a bụ arịa ọ bụla nwere ahụ. Nke ahụ bụ, ịnweta ala, ụlọ, akụkụ ụlọ na azụ. Modular ngwá ụlọ ...
Kedu kichin kichin dị mma karịa “mortise” ma ọ bụ “note mit”, +/-
Kedu kichin kichin dị mma karịa “mortise” ma ọ bụ “note consignment”, +/- Mortise bụ n'ezie ihe na-atọ ụtọ karịa, mana ọ bụrụ na kichin gị bụ ezigbo ụlọ ahịa ebe ụmụaka na-esi nri, na-echekwa ma ọ bụdị obere ...
Ivanovo calico bedding ịzụta ma ọ bụ? 1300 p. Ihe ezinyere ezinụlọ.
Ivanovo calico bedding ịzụta ma ọ bụ? 1300 p. Ihe ezinyere ezinụlọ. Lee ákwà. Ha nwere ya dị ka gauze. Ọ BỤGHỊ Anyị na-arụ ọrụ ...
Kedu ihe kwesịrị ịdị elu nke desktọọpụ ????
Kedu ihe kwesịrị ịdị elu nke desktọọpụ ???? Dị ka ọ na-adaba ide ide Ihe na-ahụ 60 ?! ! Nkwado tebụl na-edozi h = 715 + mgbanwe + tabletop. Na n'okpuru akwa okpokoro ...
Gwa m, ole ka centimeters kwesịrị site n'ala ruo na ákwà mgbochi?
Gwa m, ole ka centimeters kwesịrị site n'ala ruo na ákwà mgbochi? Achọghị m mgbe m na-aga n'elu ala, na-agbagha na ejiji. Hụ 2, 3 si n'ala. Ise. 10-45 odika. Ogologo ákwà mgbochi ...
Kedu ihe bụ akpụkpọ anụ? Ana m agbalị ịkọwa n'ime otu ụlọ ahịa na ọ dị mma karịa anụ nkịtị! Nke a ọ bụ eziokwu?
Kedu ihe bụ akpụkpọ anụ? Ana m agbalị ịkọwa n'ime otu ụlọ ahịa na ọ dị mma karịa anụ nkịtị! Nke a ọ bụ eziokwu? Eco-akpụkpọ anụ bụ ụdị leatherette nke na-eku ume. ma ugbu a ...
Kedu ihe bụ ákwà ngebichi na-adịgide?
Gịnị bụ ihe ahụ ákwà mgbochi ahụ na-akwụgide? Na Pasternak:… winterbọchị oyi na - emeghe site na mmeghe nke ákwà mgbochi anaghị arụ ọrụ. A na-ekpuchi ákwà mgbochi na ọkaice, mgbe ahụ, a na-adọta ya. Ma ọ bụ adịghị adọgbu =))). Wikipedia-Corniche ...
Kedu ụdị ákwà ngebichi m kwesịrị ime?
Kedu ụdị ákwà mgbochi nke m kwesịrị iwere? Ọ dị mfe ịkwanye ezigbo ụkpụrụ nke ákwà mgbochi iji nye iwu: onye na-atụ ahụ ga-abịakwute gị, were ihe nha, wee họrọ usoro ahụ ịchọrọ, kwụọ ụgwọ maka akwa na-arụ ọrụ - ma chere ...
Ọ ga-ekwe omume ịkọghachi akụkụ nke ọzọ nke enyo na otu esi eme ya? ntụziaka zuru ezu
Ọ ga-ekwe omume ịkọghachi akụkụ nke ọzọ nke enyo na otu esi eme ya? ntuziaka zuru ezu ntụziaka Amalgam Iji weghachite amalgam ahụ mebiri emebi na enyo, ebe a chọrọ iji dozie ka a kpochara ya site na ntutu nke owu) na akwụkwọ ...
Kedu okpokoro dị mma karịa mmiri ma ọ bụ ụfụfụ na-atụgharị anya? Olee nke ga-adịte aka ?? M na-ajụ ajụjụ ahụ dị ezigbo mkpa
Kedu okpokoro dị mma karịa mmiri ma ọ bụ polyurethane nke a na-ahụkarị? Kedu ihe ga-adịte aka ?? M na-atụgharị ajụjụ ahụ dị ezigbo mkpa Orthopedic ka mma ma dịkwuo ogologo oge m na otu ìgwè ahụ wepụtara ka ha nwee otu akwa ahụ (isi mmiri, ndị Rom mere site na nwata).
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,378.